Endoscope Kamera App yeAroid ikamera application inoenderana neApple smartphones nemapiritsi.
Icho chishandiso chakawanda chekuongorora kamera sisitimu yakanyatsogadzirirwa ine mutsindo isina waya module inoita kuti yako yeWiFi ibatane. Inotakurika uye Handheld yekuongorora kamera kune yako admin zvishandiso.
Endoscope Kamera yeApp for Android inobvumira vashandisi vayo kuona yakakwira mhando mavhidhiyo uye zvakare inobvumira vashandisi vayo kutora mifananidzo muJPG fomati pamwe nemavhidhiyo ari MP4 fomati. App yacho inobvumirawo vashandisi vayo kutora ese mavhidhiyo avo nemifananidzo 720P iyo ingave yakanyanya tsanangudzo mhedzisiro.
About Endoscope Kamera App
Iyi programu yePretty inogadzirwa neNovoTech Industries Limited uye isu tinofanirwa kuvayemura nekukudza kwakadai uye kunobatsira admin application.
Vashoma kwazvo veva android vanhu vanoziva nezve iyi App asi zvakadaro, iyi App ine akawanda ekuburitsa uye chero munhu akashandisa iyo app yakasiya inoshamisira uye inonakidza mhinduro ku Play Store nezve app.
Chinhu chakanakisa chandinoda nezve Photo Editor ndeyekuti inotsigira HD Kamera uye inopa maturusi anobatsira kune vashandisi vayo kuitira kuti vagone kutora mafambiro avo mune yakakwirira resolution mufananidzo nemavhidhiyo.
Endoscope Kamera inowanika pa Play Store uye zvakachengeteka kurodha pasi uye gadza pane yako smartphones Android uye mahwendefa. Nekudaro, kuti zvive nyore kwauri isu takapawo iyo Apk faira yeApp for Android pane yedu webhusaiti pano pano mune ino chinyorwa.
Iwe unogona kuwana Endoscope Kamera App yeApple yako nekutora / kudzvanya pane yekuburitsa link yakapihwa panoperera chinyorwa chino. Icho chemahara Kamera chishandiso chakakwirira shanduro Android zvishandiso uye inogona kushandiswa zvakasununguka iyo inotangwa mugore ra 2018.
Apk faira saizi yeApp ndeye 114 MB iyo inenge isinga zive chinhu uye iwe unogona kuirodha mukati memaminetsi mashoma uye iyi App iri kuenda kunoshandisa bhatiri rakaderera kusiyana nezvimwe zvinoshanda. Iyo inokurudzirwa zvakanyanya shanduro dzeA 4.4 uye kumusoro.
zita Endoscope Kamera App
zera 114 MB
Developer Zvikamu Novotech Industries Limited
Package Zita com.endoscope.kamera
Inodiwa Android 4.4 uye kumusoro
Unoda Rubatsiro rwehunyanzvi Paunenge Uchishandisa iyo
Kana iwe uri kutarisana nedambudziko ripi neripi rehunyanzvi muapp ipapo unogona kushanyira webhusaiti yepamhepo yeapp kana unogona kungoshanyira Novotech Industries Limited kunotora rubatsiro apo iwe unogona kusvika pakuziva nezve yekushandiswa uye zvimwe zvine nyaya uye mhinduro yavo.
Isu hatisi varidzi veichi chishandiso (Endoscope Kamera App yeAroid) asi iyo app iri yemahara uye unogona kuigoverana nevamwe mahara, nekudaro, isu takapa iyo Apk faira re App pawebhusaiti yako yaunogona kurodha nekuisa pane zvishandiso zvako.
Panzvimbo pekuenda kuGoogle Play Store uye kunyoresa account usati watora pasi kana kuisa uye ari App ingo tora chako chaunoda app nekungodzvanya / tora kubva kubhusaiti yedu.
Yese app uye mutambo watinopa pano webhusaiti yedu wakasununguka kurodha pasi uye kushandisa zvisinei, pane mamwe maapps ane ane-mukati yekutenga.
Zvese zvirongwa nemitambo yatinopa yakachengeteka kurodha asi isu hatisi mhaka yezviri mu-app nyaya kana zvinonetsa nekuti izvo zvinoshandiswa nemitambo yatinopa webhusaiti yedu yakagadziridzwa nevamwe vanhu vatisingakwanise kubatana navo kana kunetseka.
Endoscope Kamera App yeApple kana kuti (Yekuongorora Kamera yeApp for Android) inongotsigira gumi nemana Nyuchi uye pamusoro pe admins saka dhawunirodha iyo app kana wanga uchida madimikira kana maficha pane yako Android kifaa.
Categories Tools, Apps Tags Endoscope Kamera App, Photo Editor Post navigation
Nzira yekuDhaunirodha Modded Android Games (2022)
1 kufunga pa "Endoscope Kamera App Apk Dhawunirodha Yemahara ye Android "
February 6, 2022 pana 1: 44 am
chinhu chakaipisisa pamusoro peiyi apk download .. ichiri kuomerera pakumhanya kuburikidza negoogles Playstore.. pasina